သင်္ဘောမှပစ်လွှတ်တဲ့ ရေတပ်သုံး Tomahawk ခရုစ် ဒုံးကျည် နဲ့ SM-6 ကြားဖြတ် ဒုံးကျည် တွေကို အမေရိကန် ကြည်းတပ်က မြေပြင်မှ ပစ်ခတ် နိုင်ရန် စီစဉ် – Shwe Ba
သင်္ဘောမှပစ်လွှတ်တဲ့ ရေတပ်သုံး Tomahawk ခရုစ် ဒုံးကျည် နဲ့ SM-6 ကြားဖြတ် ဒုံးကျည် တွေကို အမေရိကန် ကြည်းတပ်က မြေပြင်မှ ပစ်ခတ် နိုင်ရန် စီစဉ်
အမေရိကန် ကြည်းတပ် ဟာ ပူးတွဲ တိုက်ခိုက် မှုဖြစ်နိုင်ခြေ တွေ တိုးတက် စေဖို့၊ ဒိုမိန်း ပေါင်းစုံ စစ်ဆင်မှု တွေ ပိုမို အားကောင်း လာစေဖို့ နဲ့ရန်သူ ကိုမြေပြင် မှာ ရှာဖွေ ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့တို့အတွက် ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ သင်္ဘောမှ ပစ်လွှတ် တဲ့ ရေတပ် လက်နက်အမျိုးမျိုးကို မြေပြင်မှပစ်ခတ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။(၂၀၂၃)ခုနှစ် မှာ ကြည်းတပ်ဟာ ရေတပ် ရဲ့ Tomahawk ခရုစ်ဒုံးကျည်နဲ့ SM-6 ကြားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေကို
မြေပြင် မှ ပစ်ခတ်နိုင်လိမ့် မယ်ဖြစ်ပြီး မြေပြင် တိုက်ခိုက် မှုတွေ အတွက် နည်းပညာ သစ် လက်နက် စနစ်တွေရ ရှိကာ ကြည်းတပ် တပ်မှူးတွေ အတွက် မြေပြင်မှ အလွန်ဝေးကွာသောနေရာရှိ ရွေ့လျားပစ်မှတ်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မကြာသေး မီက ပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ တွေးခေါ်ပညာရှင် များအဖွဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း ရဲ့ ပွဲတစ်ခု တွင်ကြည်းတပ် ဒုတိယ စစ်ဦးစီး ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Joseph Martin က ပြော ကြား ရာမှာ ဒိုမိန်းပေါင်းစုံ စစ်ဆင်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေ တွေကို စတင် မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပြီး မြေပြင် တပ်မှူးတွေ အတွက် ယခင် ကမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုတွေ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်လိမ့် မယ် လို့ ဆိုခဲ့ ပါ တယ်။
အောင်မြင် မှုတွေကို ကာလရှည် ကြာ ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ Tomahawk ခရုစ် ဒုံးကျည် နဲ့ SM-6 ကြားဖြတ် ဒုံးကျည် တွေဟာဖျက် သင်္ဘော တွေနဲ့ ခရုစ် သင်္ဘောတွေ ကနေ ဒေါင်လိုက် ပစ်ခတ် စနစ် တွေ ဖြစ် ကြပြီး ရေငုပ် သင်္ဘောတွေ ကနေလည်း ပစ်ခတ် နိုင်ပါတယ်။ရေ မိုင် အကွာ အဝေး (၉၀၀)ထိ ရောက် ရှိနိုင်မှု၊ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ကဲ့သို့စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ နည်းလမ်း နှစ်သွယ် ဒေတာချိတ်ဆက်နိုင်မှုနဲ့အောင်မြင် မှုတွေကြောင့် Tomahawk ခရုစ် ဒုံးကျည်ဟာ စစ်ရေး ပဋိပက္ခအစဦးပိုင်းမှာ ပထမဆုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ လက်နက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
လွန် ခဲ့တဲ့နှစ်တွေ က ဆိုဗီယက် တို့ရဲ့ လေကြောင်း ရန် ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေကို တုန့်ပြန်ဖို့ တည်ဆောက် ထားတဲလမ်းကြောင်း အနိမ့်ပျံ Tomahawk ခရုစ်ဒုံးကျည်ဟာ ရန်သူရဲ့ရေဒါတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်နဲ့အပြိုင် ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။၎င်း ဒုံးကျည်တွေ ဟာ တိကျမှု ရှိပြီး စစ်ပွဲရဲ့အစပိုင်းရက် တွေမှာ ပုံသေပစ်မှတ်တွေကို ထိရောက်စွာ ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ရန်သူရဲ့ ကွပ်ကဲမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတွေ၊ ဘန်ကာတွေနဲ့ အခြား တန်ဖိုးကြီး အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုအရေး ပါတဲ့ အချက် အ နေနဲ့ လက်ရှိ အချိန် မှာ ရေတပ် ဟာ အသစ်ပြင်ဆင် ထားတဲ့ ရေပြင်ပစ် Tomahawk ဒုံးကျည် ကို ပင်လယ်ပြင်ရှိ ရွေ့လျား ပစ်မှတ် တွေ ကို ဖျက်ဆီးဖို့ အတွက် အင်ဂျင်နီ ယာ နည်းပညာ ပိုင်းတွေ တည်ဆောက် နေ ပါ တယ်။အထူး သဖြင့် သမိုင်း ကြောင်း အရ ပုံသေ ပစ်မှတ်တွေအပေါ် အသုံးပြု တဲ့ လက်နက်ဖြစ် တာကြောင့်လျင်မြန် စွာပြောင်းလဲနေ တဲ့စစ်ပွဲအခြေအနေ တွေမှာ တပ်မှူး တွေ အတွက်တိုက်ခိုက် မှုရွေးချယ် စရာအသစ်တွေကို ယူဆောင်ပေးမဲ့ အရေးပါတဲ့လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ် ထွက်ပေါ် လာမဲ့ Tomahawk ဒုံးကျည် ဟာ ရွေ့လျား ပစ်မှတ် တွေဆီ ချဉ်းကပ် လာချိန်မှာ ပျံသန်းရာ လမ်းကြောင်းကို ပြန် လည်ချိန် ညှိပေးဖို့အတွက် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှု၊ အာရုံခံမှုနဲ့ ပစ်မှတ်ချိန်ရွယ်မှု အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တွေနဲ့အတူ အချက်အလက်တွေထည့်သွင်းထား တဲ့တိုး တက် ကောင်းမွန်တဲ့ရေဒီယို ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
အဲဒီ နည်းပညာ ကို ကြည်းတပ် က လက်ခံ ရရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် Tomahawk ဒုံးကျည် ဟာပင်လယ်ပြင်မှ နေပြီး အကွာအဝေး အတွင်းရှိ သင်္ဘောတွေ ဒါမှမဟုတ် နယ်မြေတွေကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘဲ မြေပြင် တပ်မှူးတွေကို လည်း မရောက်နိုင် တဲ့အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ တာဝေးပစ်မှတ်တွေဆီကို ရောက်ရှိဖို့ အခွင့်အလန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖော်ပြပါ အချက် အလက် တွေကြောင့် မြေပြင် ပစ် Tomahawk ဒုံးကျည် ဟာ နည်းဗျူဟာ အရအရေးပါတဲ့လက်နက်ဖြစ်ပြီး ရှေ့တန်းရှိ မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် မြေပြင်ပစ်မှတ်တွေထိမှန်ဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ တိုးမြှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ရေ တပ် ရဲ့ SM-3 ကို မြေပြင်အခြေစိုက် ပင်တဂွန် Aegis Ashore ဒုံးကျည် ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေမှာ တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့SM-6 ဟာ မြေပြင် တပ်မှူးတွေအတွက် နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှု ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်မှု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။၎င်းလက် နက် ကို “dual-mode” ရှာဖွေရေးကိရိယာ ဆော့လ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ရေတပ် က ဆက် လက် မှာယူ မှုတွေရှိနေပါတယ်။ SM-6 ဟာ ပျံသန်းနေချိန်မှာ လှုပ်ရှားစစ်ကစားနိုင်စွမ်းရှိပြီးရွေ့လျားနေတဲ့ ပစ်မှတ်မှထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရေဒါအမှတ်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
“dual-mode” ရှာဖွေရေး ကိရိယာ တပ်ဆင် ထား တဲ့ SM-6 ဟာ ၎င်းရဲ့ကိုယ် တိုင် built-in ဖမ်းယူစက် ပါရှိပြီး၎င်းဖမ်း ယူစက် ဟာဆို ရင် ပျံသန်းနေချိန် အတွင်း အချက်ပြသင်္ကေတပေးပို့ခြင်းနဲ့ ပစ်မှတ်အသစ်မှ သတင်းအချက်အလက်ဖမ်းယူခြင်းနှစ်မျိုး စလုံးကို ဆောင်ရွက်နိုင် ပါတယ်။ SM-6 ဟာ ကာကွယ်ရေးကြားဖြတ်လက်နက်အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်တွေ ကို ခြေရာခံပြီး အနီးကပ် ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ကြားဖြတ်လက်နက်ဖြစ်တာကြောင့်
မြေပြင် တပ်မှူးတွေ အတွက် အလွန် အသုံးဝင်တဲ့ လက်နက်ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် SM-6 ကိုထိုးစစ်ဆင် စစ်တိုက်ခိုက် မှုတွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက ရေတပ်ရဲ့ လက်ရှိ တပ်ဖြန့်ချထားတဲ့Naval Integrated Fire Control-Counter Air system မှာလည်း ၎င်း SM-6 ကို အသုံးပြုနေ တာကြောင့်နည်း ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာဖြစ် နိုင်ခြေ ပိုမိုပြည့်စုံ လာနိုင် ပါတယ်။၎င်း SM-6 ကို လေကြောင်း အာရုံခံကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေ၊စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး လေယာဉ် တွေ၊ တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီး ပစ်မှတ်တွေကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ခံစစ် ဆင် တိုက် ခိုက်ခြင်း နှစ်မျိုးစ လုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အမရေိကနျ ကွညျးတပျ ဟာ ပူးတှဲ တိုကျခိုကျ မှုဖွဈနိုငျခွေ တှေ တိုးတကျ စဖေို့၊ ဒိုမိနျး ပေါငျးစုံ စဈျဆငျမှု တှေ ပိုမို အားကောငျး လာစဖေို့ နဲ့ရနျသူ ကိုမွပွေငျ မှာ ရှာဖှေ ဖကျြဆီးနိုငျဖို့တို့အတှကျ ဆနျးသဈတဲ့ နညျးလမျးတှကေိုရှာဖှတေဲ့ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျမှုတဈစိတျတဈပိုငျးအနနေဲ့ သင်ျဘောမှ ပဈျလှတျ တဲ့ ရတေပျ လကျနကျအမြိုးမြိုးကို မွပွေငျမှပဈခတျနိုငျဖို့ စီစဉျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။(၂၀၂၃)ခုနှဈျ မှာ ကွညျးတပျဟာ ရတေပျ ရဲ့ Tomahawk ခရုဈဒုံးကညျြနဲ့ SM-6 ကွားဖွတျဒုံးကညျြတှကေို
မွပွေငျ မှ ပဈခတျနိုငျလိမျ့ မယျဖွဈပွီး မွပွေငျ တိုကျခိုကျ မှုတှေ အတှကျ နညျးပညာ သဈျ လကျနကျ စနဈတှရေ ရှိကာ ကွညျးတပျ တပျမှူးတှေ အတှကျ မွပွေငျမှ အလှနျဝေးကှာသောနရောရှိ ရှလြေ့ားပဈမှတျတှကေို တိုကျခိုကျဖကျြဆီးဖို့ စှမျးဆောငျရညျတှေ ထပျမံ မိတျဆကျပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။မကွာသေး မီက ပွုလုပျခဲ့ တဲ့ ကာကှယျရေး ဆိုငျရာ ဒီမိုကရစေီ တှေးချေါပညာရှငျ မြားအဖှဲ့ ဖောငျဒေးရှငျး ရဲ့ ပှဲတဈခု တှငျကွညျးတပျ ဒုတိယ စဈျဦးစီး ခြုပျ ဗိုလျခြုပျကွီး Joseph Martin က ပွော ကွား ရာမှာ ဒိုမိနျးပေါငျးစုံ စဈျဆငျမှု ဖွဈနိုငျခွေ တှကေို စတငျ မိတျဆကျ ပေးခဲ့ပွီး မွပွေငျ တပျမှူးတှေ အတှကျ ယခငျ ကမကွုံခဲ့ဘူးတဲ့ နညျးဗြူဟာပိုငျးဆိုငျရာရှေးခယျြမှုတှေ ဆောငျကဉျြးပေးနိုငျလိမျ့ မယျ လို့ ဆိုခဲ့ ပါ တယျ။
အောငျမွငျ မှုတှကေို ကာလရှညျ ကွာ ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ Tomahawk ခရုဈျ ဒုံးကညျြ နဲ့ SM-6 ကွားဖွတျ ဒုံးကညျြ တှဟောဖကျြ သင်ျဘော တှနေဲ့ ခရုဈျ သင်ျဘောတှေ ကနေ ဒေါငျလိုကျ ပဈျခတျ စနဈျ တှေ ဖွဈျ ကွပွီး ရငေုပျ သင်ျဘောတှေ ကနလေညျး ပဈခတျ နိုငျပါတယျ။ရေ မိုငျ အကှာ အဝေး (၉၀၀)ထိ ရောကျ ရှိနိုငျမှု၊ မောငျးသူမဲ့ လယောဉျကဲ့သို့စှမျးဆောငျနိုငျမှု၊ နညျးလမျး နှဈသှယျ ဒတောခြိတျဆကျနိုငျမှုနဲ့အောငျမွငျ မှုတှကွေောငျ့ Tomahawk ခရုဈျ ဒုံးကညျြဟာ စဈရေး ပဋိပက်ခအစဦးပိုငျးမှာ ပထမဆုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျတဲ့ လကျနကျဖွဈခဲ့ပါတယျ ။
လှနျ ခဲ့တဲ့နှဈတှေ က ဆိုဗီယကျ တို့ရဲ့ လကွေောငျး ရနျ ကာကှယျရေး စနဈျတှကေို တုနျ့ပွနျဖို့ တညျဆောကျ ထားတဲလမျးကွောငျး အနိမျ့ပြံ Tomahawk ခရုဈဒုံးကညျြဟာ ရနျသူရဲ့ရဒေါတှကေို ရှောငျရှားနိုငျဖို့ သမုဒ်ဒရာမကျြနှာပွငျနဲ့အပွိုငျ ပြံသနျးနိုငျခဲ့ပါတယျ ။၎င်းငျး ဒုံးကညျြတှေ ဟာ တိကမြှု ရှိပွီး စဈပှဲရဲ့အစပိုငျးရကျ တှမှော ပုံသပေဈမှတျတှကေို ထိရောကျစှာ ပဈခတျနိုငျပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ရနျသူရဲ့ ကှပျကဲမှုနဲ့ထိနျးခြုပျရေးစငျတာတှေ၊ ဘနျကာတှနေဲ့ အခွား တနျဖိုးကွီး အခွခေံအဆောကျအအုံတှကေို ဖကျြဆီးနိုငျပါတယျ။
ပိုမိုအရေး ပါတဲ့ အခကျြ အ နနေဲ့ လကျရှိ အခြိနျ မှာ ရတေပျ ဟာ အသဈပွငျဆငျ ထားတဲ့ ရပွေငျပဈ Tomahawk ဒုံးကညျြ ကို ပငျလယျပွငျရှိ ရှလြေ့ား ပဈျမှတျ တှေ ကို ဖကျြဆီးဖို့ အတှကျ အငျဂငျြနီ ယာ နညျးပညာ ပိုငျးတှေ တညျဆောကျ နေ ပါ တယျ။အထူး သဖွငျ့ သမိုငျး ကွောငျး အရ ပုံသေ ပဈျမှတျတှအေပျေါ အသုံးပွု တဲ့ လကျနကျဖွဈျ တာကွောငျ့လငျြမွနျ စှာပွောငျးလဲနေ တဲ့စဈပှဲအခွအေနေ တှမှော တပျမှူး တှေ အတှကျတိုကျခိုကျ မှုရှေးခယျြ စရာအသဈတှကေို ယူဆောငျပေးမဲ့ အရေးပါတဲ့လကျနကျဖွဈပါတယျ။
အသဈျ ထှကျပျေါ လာမဲ့ Tomahawk ဒုံးကညျြ ဟာ ရှလြေ့ား ပဈျမှတျ တှဆေီ ခဉျြးကပျ လာခြိနျမှာ ပြံသနျးရာ လမျးကွောငျးကို ပွနျ လညျခြိနျ ညှိပေးဖို့အတှကျ ကှနျရကျ ခြိတျဆကျမှု၊ အာရုံခံမှုနဲ့ ပဈမှတျခြိနျရှယျမှု အကျပလီကေးရှငျးအသဈတှနေဲ့အတူ အခကျြအလကျတှထေညျ့သှငျးထား တဲ့တိုး တကျ ကောငျးမှနျတဲ့ရဒေီယို ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။
အဲဒီ နညျးပညာ ကို ကွညျးတပျ က လကျခံ ရရှိခဲ့မယျ ဆိုရငျ Tomahawk ဒုံးကညျြ ဟာပငျလယျပွငျမှ နပွေီး အကှာအဝေး အတှငျးရှိ သင်ျဘောတှေ ဒါမှမဟုတျ နယျမွတှေကေို တိုကျခိုကျရာမှာ ကနျ့သတျခကျြတှရှေိတော့မှာမဟုတျဘဲ မွပွေငျ တပျမှူးတှကေို လညျး မရောကျနိုငျ တဲ့အကှာအဝေးမှာရှိတဲ့ တာဝေးပဈမှတျတှဆေီကို ရောကျရှိဖို့ အခှငျ့အလနျးပေးပါလိမျ့မယျ။ ဖျောပွပါ အခကျြ အလကျ တှကွေောငျ့ မွပွေငျ ပဈျ Tomahawk ဒုံးကညျြ ဟာ နညျးဗြူဟာ အရအရေးပါတဲ့လကျနကျဖွဈပွီး ရှတေ့နျးရှိ မွပွေငျတပျဖှဲ့တှအေတှကျ မွပွေငျပဈမှတျတှထေိမှနျဖို့ စှမျးဆောငျရညျတှေ တိုးမွှငျ့ပေးပါလိမျ့မယျ။
ရေ တပျ ရဲ့ SM-3 ကို မွပွေငျအခွစေိုကျ ပငျတဂှနျ Aegis Ashore ဒုံးကညျြ ကာကှယျရေးစနဈတှမှော တပျဆငျထားပွီးဖွဈပမေဲ့SM-6 ဟာ မွပွေငျ တပျမှူးတှအေတှကျ နောကျထပျတိုကျခိုကျမှု ဒါမှမဟုတျ ကာကှယျရေးဆိုငျရာရှေးခယျြမှု ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။၎င်းငျးလကျ နကျ ကို “dual-mode” ရှာဖှရေေးကိရိယာ ဆော့လျဝဲအဆငျ့မွှငျ့တငျမှုတှပွေုလုပျနတောကွောငျ့ရတေပျ က ဆကျ လကျ မှာယူ မှုတှရှေိနပေါတယျ။ SM-6 ဟာ ပြံသနျးနခြေိနျမှာ လှုပျရှားစဈကစားနိုငျစှမျးရှိပွီးရှလြေ့ားနတေဲ့ ပဈမှတျမှထှကျပျေါလာတဲ့ ရဒေါအမှတျကို ခြိနျညှိနိုငျပါတယျ။
“dual-mode” ရှာဖှရေေး ကိရိယာ တပျဆငျ ထား တဲ့ SM-6 ဟာ ၎င်းငျးရဲ့ကိုယျ တိုငျ built-in ဖမျးယူစကျ ပါရှိပွီး၎င်းငျးဖမျး ယူစကျ ဟာဆို ရငျ ပြံသနျးနခြေိနျ အတှငျး အခကျြပွသင်ျကတေပေးပို့ခွငျးနဲ့ ပဈမှတျအသဈမှ သတငျးအခကျြအလကျဖမျးယူခွငျးနှဈမြိုး စလုံးကို ဆောငျရှကျနိုငျ ပါတယျ။ SM-6 ဟာ ကာကှယျရေးကွားဖွတျလကျနကျအနနေဲ့အသုံးပွုနိုငျခွငျး၊ပဲ့ထိနျး ဒုံးကညျြတှေ ကို ခွရောခံပွီး အနီးကပျ ဖကျြဆီးနိုငျတဲ့ ကွားဖွတျလကျနကျဖွဈတာကွောငျ့
မွပွေငျ တပျမှူးတှေ အတှကျ အလှနျ အသုံးဝငျတဲ့ လကျနကျဖွဈျ ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ SM-6 ကိုထိုးစဈျဆငျ စဈျတိုကျခိုကျ မှုတှမှောလညျးအသုံးပွုနိုငျရုံသာမက ရတေပျရဲ့ လကျရှိ တပျဖွနျ့ခထြားတဲ့Naval Integrated Fire Control-Counter Air system မှာလညျး ၎င်းငျး SM-6 ကို အသုံးပွုနေ တာကွောငျ့နညျး ပညာရပျပိုငျး ဆိုငျရာဖွဈ နိုငျခွေ ပိုမိုပွညျ့စုံ လာနိုငျ ပါတယျ။၎င်းငျး SM-6 ကို လကွေောငျး အာရုံခံကိရိယာတှဖွေဈတဲ့ မောငျးသူမဲ့လယောဉျတှေ၊စောငျ့ကွညျ့ လလေ့ာရေး လယောဉျ တှေ၊ တိုကျလယောဉျတှနေဲ့တှဲဖကျပွီး ပဈမှတျတှကေို ထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျခွငျးနဲ့ခံစဈျ ဆငျ တိုကျ ခိုကျခွငျး နှဈမြိုးစ လုံးတှငျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ တွင် ရွေ့လျားမီးသင်္ဂြိုဟ်စက်ဖြင့် Covid 19 ကြောင့် သေဆုံးသူ ရုပ်အလောင်း များကို သင်္ဂြိုဟ်ပေး
ရှရုားနိုင်ငံ ဟာ ဟာတရုတ် အတွက် မဟာ မိတ် လား ? ခါးပိုက်ထဲ ကမြွေပွေး လား ?
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တွင် ရဲမှူးကြီး တစ်ယောက်၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို ဗုံးခွဲသမား တစ်ယောက်က အသေခံဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့